आज अक्षय तृतीया, जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै - Mahendranagar Post
Home अन्य अध्यात्म आज अक्षय तृतीया, जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै
काठमाडौं – आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया । जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदैछ । यस दिन विष्णु र लक्ष्मीको पूजा गर्नुका साथै दान गरेमा शुभ फल मिल्ने धार्मिक विश्वास छ ।
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा‍. रामचन्द्र गौतमकाअनुसार यो पर्व हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरूको लागि अरू पर्वभन्दा विशेष छ । यो दिन प्राचीनकालदेखि नै अनेक किसिमका विशेष कार्यहरू भएका छन् । त्यसैले यसलाई विशेष दिनको रुपमा मान्न थालिएको हो ।
उनकाअनुसार वैशाख तृतीयाकै दिनदेखि त्रेता युगको सुरुवात भएको हो। यही दिन भगवान परशुराम अवतारको जन्म भयो । त्यसैले यस दिनलाई परशुराम जयन्तीको रूपमा पनि मनाइन्छ । यही दिन शिव–पार्वतीको विवाह पनि भएको थियो । त्यसैले यस दिन गरेको स्नान, दान र शुभ कर्मलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
Previous articleकोरोना कहरः ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी, ४ जिल्ला बाँकी
Next article४२औं प्रधामन्त्रीको रुपमा ओली आज शपथ लिँदै
आज निर्जला एकादशी, के छ यसको धार्मिक महत्व ?
गङ्गा दशहराको अवसरमा गोदावरी माता मन्दिरमा गरियो पूजाआजा